waqti Post: May-09-2017
sifooyinka Dhismayaasha of contactor AC
waqti Post: Sep-02-2016
1, contactor ee nooca ilaalinta, qaab-dhismeedka tallaabada waa nooca mooshin toos ah, barta xiriirkaaga waa barta fasax double, leedahay sifooyinka of size yar yar, miisaanka iftiin, isticmaalka awood yar yahay, nolosha adeeg dheer, ammaanka iyo isku halaynta; 2, contactor ka kooban karaa m ...Read more »
Shaqaynta mabda'a ah in ka badan Relay kulaylka
Mabda'a shaqada ee Relay kaamerada waa kulaylka ee ay hadda ku tagaya element kulaylku, bimetal leeyihiin horgalaha kala duwan ee lahayo ku ballaarinta, marka calaamadaha lahayo markuu u yimid meel fog qaarkood ku dhaqaaqdo ul riix, circuit gacanta la jaro, sidaas darteed t ...Read more »
DC contactor sida loo isticmaalo?
First, isticmaalka hababka: 1 nooca contactor DC waa in la soo xulay sida ay nooca load hadda iyo miisaanka iftiin of Xamuulka, in uu yahay, load AC ama DC ee, waa load nuurka, load guud ama load culus. xisaabi kartaa IN xiriirka ugu weyn ee in ka badan PN motor ...Read more »
Relay dollar kaamerada mabda 'ka shaqeeya?
Markii ugu tallaabo ah Relay kaamerada waxayna cuslaynaysaa hadda sida ay size ee isbedelka waqtiga bedelka sida Relay kaamerada, ilaalinta dollar motor, motor waa inay hubiyaan upka caadiga ah iyo orodka kama beddelayso, iyo kordhiyo karo awoodda motor ah, si mooshinka qalooca caan ku ...Read more »
isticmaalka waxa ka sameysan waa in aad bixiso waxa dareenka?
waqti Post: Aug-29-2016
Security ku wargeliyay, in la rakibo, qalliin, qalliin, dayactirka, kormeerka, fadlan hubi inaad si taxadar leh u akhri taxanaha ee shirkadda ka mid ah caddaymaha soo saarka, iyo iyadoo la raacayo tilmaamaha ku qoran waxyaabaha la rakibo sax ah, isticmaalka sheyga. 14700274686957991.jp ...Read more »
Haddii aadan aqoon waxa Google Analytics waa, ma aydnaan rakibay on your website, ama waxa lagu rakibay laakiin marna eegto xogta aad, ka dibna this post waxa loogu talagalay adiga. Inkastoo ay adag tahay dad badan in ay aaminsan yihiin, waxaa weli jira websites in aan la isticmaalayo Google Analytics (ama wax Analytics, waayo ...Read more »